Dawlad-Deegaanka Soomaalidu Ma noqon doonaa Xuddunta Soomaalida Geeska? Yusuf Osman Garas | Xaysimo
Home War Dawlad-Deegaanka Soomaalidu Ma noqon doonaa Xuddunta Soomaalida Geeska? Yusuf Osman Garas
Ummadda Soomaalidu waxa ay ka mid tahay qoomiyadaha deggan waddamada bariga Afrika. Shantii Soomaaliyeed, waxa ka suurtagalay in la helo saddex dawladood oo madaxbannaan, aakhirkiina laba dawladood oo saddexdii ka mid ahi markii ay isku darsadeen (British Protectrate Somaliland iyo Somali Italian) waxa soo hadhay laba dawladood oo madaxbannaan.
Intii ka dambaysay burburkii dawladdii kelitaliska ahayd ee Maxamed Siyaad Barre 1991kii, goballadii Waqooyi ee Soomaaliya waxa ay dib ula soo noqdeen xornimadoodii. Laakiin ilaa hadda ma aanay helin wax aqoonsi ah, mana jirto dawlad qudha oo ilaa hadda dal madaxbannaan u ictiraaftay. Wixii burburka ka danbeeyay, Koonfurta Soomaaliya iyaduna waxa ay ku jirtay dagaallo sokeeye ama xaalado amnidarro ah. Intaa wixii ka danbeeyay, waxa lumay in aan si cad loo oddorosi karin meel ay saldhigan doonto iyo mustaqbalka halka uu ku dambayn doono aayaha ummadda Soomaalida ee Geeska Afrika.
Marka la soo ururiyo, dhulweynaha Soomaalidu deggan tahay, maanta Jabbuuti oo qudha ayaa ka ah dal si buuxda u madaxbannaan; DDS iyo NFD waxa ay weli ka mid yihiin labada dal ee Itoobiya iyo Kiiniya. Soomaalilaand weli ma ay helin aqoonsi caalami ah, halka ay Koonfurtana weli tahay dal u baahan cid la dhista amnigii gudaha iyo nidaamkii dawladnimo ee soddonka sannadood soo burburayay.
Marka aad dhex marto suuqyada kala duwan ee magaalda Jigjiga, waxa aad ku arkaysaa shantii Soomaaliyeed oo si bilaa dhibaato, bilaa xasarad, bilaa xanaf iyo bilaa cunfi ah ku wada nool ama ku wada shaahaynaya. Waxa xusid mudan in xukuumadda hadda taladda haysa ee gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ee uu hoggaamiyo Madaxwayne Mustafe Cagjar ay si aan gabbasho lahayn oo sharaf iyo maamuus leh ugaga nuuxnuuxsatay fagaarayasha la iskugu yimaaddo in halkan xarunta Jigjiga ay tahay, noqon doontana, meel u siman oo kulmisa dhammaan dadka u dhashay qooyimadda Soomaalida, ama ujeeddo ahaan meel hoy u wada ah Soomaali oo idil.
Siyaasadda caynkan ah ama khudbadaha madaxweynaha ee farriimaha sidan ah xanbaarsani waxa ay runtii si xooggan u gilgileen quluubta iyo laabaha qof kasta oo ka isiran ummadda Soomaalida ee ee siyaasadda nacaybshaha iyo xumaatada siyaasigu kala qoqobtay. Taasi waxa ay dhalisay in ay dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ku dhiirradaan in ay yimaaddaan Jigjiga iyo Deegaanka Soomaalida, kii iman kari waayayna uu qalbiga duco iyo farxad uga soo diro.
b. Intaas waxa u dheer shidaalka haddeer lagu guulaystay sahamintiisii kowaad-
Dhaqanku waa shay adag oo dabar u ah qofka, laakiin waa aad ka beddali kartaa dhaqankaaga wixii aad is leedahay horumarkaaga ayuu dabar ku noqon karaa. Tusaale ahaan, Soomaalidu waxa ay ku soo dhaqantay, haddeerna ku dhaqantaa in ay yihiin ummad hadal (oral society) oo weelayn hadalladooda, hawraarahooda, taariikhahooda iyo murtidooda intaba. Waxa kale oo ay ku soo dhaqantay ama la arkay in haddiiba ay wax u qoran yihiin – xeer iyo xaagaan ba – aanay ku dhaqmin waxaas ay qoratay, oo aanay cidiba ku xisaabtamin.
Bulshada DDS waxa ay la mid yihiin dadkooda kale ee Soomaalida ah oo waxa lagu nool yahay subax walba dhibtii jirta in wixii la is tuso lagu maamulo. Dabcan, xukuumaddu way leedahay qorshayaal, balse kuwaasi waa horumarka arrimaha bulshada ee haddii aan xukumaddi helin machaddo ama aqoonyahan ururusan oo tuujiya caqligooda iyo ka dadkoodaba (think-tank groups) suurtagal noqon mayso in xukuumadda laga doono in ay dalka ka dhigto mid barwaaqasooran ah oo waliba reerka u rara masno, kana badbaadiya haddii ba ay jiraan, dhibaatooyin siyaasadeed ama dhaqaale oo khatargalin karaa.
Itoobiya, dawladda dhexe waxa ay maanta ku mashquulsan tahay in ay dejiso qulqulatooyinka iyo kacdoonnada ka jira gudaheeda; abuurista in nidaamkan cusubi kasbado quluubta iyo kalsoonida qaar ka mid ah deegaannada dalka iyo hubinta in uu meesha ka baxay nidaamkii hore intiisa aan la rabin ee dhexda kaga maran weli deegaannada qaar kood. Indho badan sidaas looguma hayo deegaanka Soomaalida, sababta oo ah, qooyimadda hadda talada dalka haysaa waxa ay og yihiin in aanay jirin siyaasad colaadeed oo xagjir ah oo u dhexaysa Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada.
Runtii way jirtaa in dhibaatooyin dhex mareen oo haddeerna wax sii dhex yaallaan labada qoomiyadeed, hase yeeshee dhibahaasi ma aha kuwo sidaas u sii gaamuray ama ay ku jiraan gacmo kale oo aan rabin wanaagga iyo horumarka dalka Itoobiya. Soomaalida deegaankan ayay dadka qaar debcigeeda ku sifeeyaan mid muddooyinkii danbe Itoobiya la jaanqaaday oo hayin dabacsan u noqda hadba qoomiyadda talada timaadda.
Nasiibdarro deegaanka Soomaalidu kama faa’iidaysan oo wax la taaban karo horumar ah kama dhaxlin hayinnimadii 27kii sanno ee EPRDF dalka maamulaysay, muddadaas oo ay labada qoomiyadood – Soomaali iyo Tikree – gacansaar dhow lahaayeen.
Su’aashu waxa ay tahay maanta Deegaanka Soomaalidu ma noqon doonaa mid wax ka bartay casharradii hore ee ahaa hayin bilaa dhaxal ah in ay noqdaan kuwa ku gorgortami kara oo garabsaarkooda loo baahan yahay. Qoomiyadda oramiya ee maanta talada haysaa, si bila shaki ah waxa ay qirsan yihiin in qoomiyadda Soomaalidu ay tahay kuwa la aamini karo, oo la isku halleyn karo, danna u ah marka ay timaaddo isgarabsashada siyaasadeed. Weyddiinta kale waxa ay tahay, ma jirtaa Deegaanka Soomaalida xukuumad iyo aqoonyahan ba, wax uga meel yaalla iyo nidaam ay la hortagi karaan marka ay timaaddo xulafaysigan. Waa middi laba af leh, waayo, in aad cid garabka saartaa waa; gari laba nin kama wada qosliso. Isku soo xoori oo, waxa la saaran yahay doonidii jacaylka ee heestii Maxamed Mooge qaadi jiray ku jirtay.
Waxa intaas dheer, duufaannada iyo dabaylaha badaha siyaasadeed ee gudaha Itoobiya waxa ay marayaan xilli xagaa’ ah, gaar ahaan, waqtiyada ay dhacdo dabaysha loo yaqaanno “Shimaal”. Waxa lagu khasban yahay in doontani shiraacato iyada oo xaaladda badduna sidan tahay. Sababta oo ah, isbeddalka dhacay waa in uu u dhaqaaqaa jihadii la rabay, dabayshii shimaalkuna way dhacaysaa, xaaladda siyasadeed gudaha Itoobiyana halkaas ayay maraysaa.